Etu ị ga-esi tinye nsụgharị azụmaahịa gị iji rite uru na Ecommerce Boom | Martech Zone
Ecommerce abụwo omume na-ebili n'ime afọ iri gara aga. Na ọrịa a na-efe efe, ọtụtụ mmadụ na-azụ ahịa n'ịntanetị karịa mgbe ọ bụla. Ecommerce na-enye ụzọ zuru oke iji ruo igwe mmadụ n’ụwa niile site na nri n’azụ kọmputa. N'okpuru, anyị ga-eleba anya na mkpa nke ntụgharị asụsụ ahịa ọrụ na otu esi eji ha iji bulie ahịa eCommerce gị.
Ihe kpatara ọ ji akwụ ụgwọ iji Nsụgharị Professionalzụ ahịa Ọkachamara maka Usoro Azụmaahịa Gị Mba
Iji ọrụ ntụgharị ọrụ ọkachamara maka ọrụ eCommerce gị nwere ike ị nweta nnukwu ụgwọ ọrụ. Ofer Tirosh, onye isi oche ndị na-ahụ maka ọrụ asụsụ Tomedes, na-enye ndụmọdụ banyere ịchọta ọkachamara ụlọ ọrụ na-ewu ya n'ime gị atụmatụ ahia ahia mba ofesi iji gbasaa:
Ọ bụrụ n ’ị naghị asụ asụsụ mba a na-ekwu maka ya, chọta ezigbo ụlọ ọrụ gị na ha ga - arụ ọrụ - ma mee ya ọsịsọ! Itinye otu ụlọ ọrụ na azụmaahịa azụmaahịa mba ụwa gị site na mbido nwere ike ime nnukwu ihe dị iche na oge ịga nke ọma. Ma ị na-enyocha omenala obodo, ịchọ ozi gbasara usoro ịre ahịa kachasị amasị gị n'ahịa ịchọrọ, ma ọ bụ na-eweta ozi gbasara ngwaahịa gị, inwe onye na-asụ asụsụ ahụ nke ọma dị mkpa. Ezigbo onye ntụgharị nwere ike ijikwa ihe niile site na ozi ịre ahịa na ọrụ ntụgharị nrụọrụ weebụ nwere ike bụrụ akụkụ dị oke ọnụ ahịa nke gị ngwa ngwa atụmatụ ahia ahia mba ofesi.
Ofer Tirosh, onye isi oche nke Tomedes
Ecommerce na-agbawa n'afọ a, ebe ndị mmadụ na-amanye ịzụ ahịa n'ịntanetị mgbe ụlọ ahịa na-emechi ma ọ bụ na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ghara ịdị. Na Q2 2020, eCommerce sales na US, dịka ọmụmaatụ, wụliri elu ruo 16.1%, site na 11.8% na Q1.
Gụọ na-amụta otú e si eji ntụgharị asụsụ ahịa iji nyere aka bulie azụmahịa eCommerce gị.
Etu ị ga - esi zụọ ahịa Ecommerce gị site na iji Ntugharị Azụmaahịa
Ntughari ahia kpuchitere ọtụtụ ụdị ahịa dijitalụ nke nwere ike inyere gị aka iwepụta okwu a na ọnụ ọgụgụ ziri ezi gbasara igwe mmadụ gbasara ebe nrụọrụ weebụ gị eCommerce. Site na ntụgharị asụsụ ahịa, ị nwere ike ijide n'aka na mbọ ndị ahịa dijitalụ ndị a na-eme ka ndị mmadụ banye na saịtị eCommerce gị. Kedu ihe atụ ụfọdụ nke nsụgharị? Karịsịa site na ọnọdụ dijitalụ, ha gụnyere:
Social mgbasa ozi posts
Dijitalụ dijitalụ, gụnyere mgbasa ozi ngosi na mgbasa ozi mgbasa ozi
Mgbakwunye ahịa posts
Mgbasa ozi vidiyo
Ntughari ahia nwekwara ike inye aka na ịsụgharị ihe ahịa maka mgbasa ozi ọdịnala ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ụlọ ọrụ gị chere na ọ bara uru itinye ego na gị gbado anya na atụmatụ ahịa mgbalị. Ntughari ahia nwere ike ijikwa mgbasa ozi mbipụta ọdịnala, broshuọ, akwụkwọ ozi ahịa, akwụkwọ ọkwa, katalọgụ, na ndị ọzọ.
Ahịa ọdịnaya bụ ụzọ ọzọ iji nyefee gị ntụgharị asụsụ ahịa tinye ego na eCommerce. Ọ naghị akwalite otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kpọmkwem. Kama, ọ na-ewepụta ọdịnaya nke na-enye ihe ọmụma ma ọ bụ na-atọ ụtọ maka igwe mmadụ dabara adaba. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa eCommerce na-eweta anụ ụlọ nwere ike ịmepụta blog banyere ụzọ kachasị mma iji zụọ nwa nkịta ọhụrụ.
Marketingre ahịa ọdịnaya na-eme ka ndị mmadụ tinye aka na ika ahụ ma gwa ndị ahịa nwere ike ịnwe enyemaka na-enyere ha aka. Omenala ahia na-achọ ka ndị mmadụ zụta, nke bụ ntụgharị nke ọtụtụ ndị ọrụ ịntanetị taa. Ahịa ọdịnaya nwere ike ịbụ akụkụ siri ike nke ọ bụla atụmatụ ahia ahia mba ofesi.
Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịga ahịa azụmaahịa, ọrụ ntụgharị nwere ike ijide n'aka na ọdịnaya gị na-enye aka ma na-atọ ụtọ na-edobe isi ozi ya ma dabara n'asụsụ na ọdịbendị ọhụrụ.
Ntugharia ahia na saiti Ecommerce gi
Ntughari ahia nwekwara ike inyere aka na saịtị gị eCommerce n'onwe ya. Ijide n'aka na asụgharị saịtị gị nametụtara ime obodo bụ akụkụ dị mkpa nke ihe atụmatụ azụmaahịa mba ụwa. Gịnị bụ ntụgharị asụsụ n'ozuzu? Ntụgharị asụsụ na-ahụ na ederede n'onwe ya gụrụ nke ọma n'asụsụ ọhụrụ. Agbanyeghị, ịchọpụta ebe dịkwa ezigbo mkpa maka ihe Ahụike eCommerce. Mpaghara nwere ike:
Melite akara niile na nhazi na weebụsaịtị, dị ka akara ego, ụdị adreesị na akara ekwentị
Gbaa mbọ hụ na nhazi ahụ dabara na atụmanya ndị ahịa mpaghara yana asụsụ ọhụrụ
Melite eserese dị ka foto iji dabaa na mgbakọ ọdịnala mpaghara
Nyere saịtị eCommerce ka ọ dabaa na iwu obodo dịka iwu nzuzo ma ọ bụ ọkwa kuki
Debe ọdịnaya dị na weebụsaịtị n'onwe ya nke ọma
A ọma ntụgharị asụsụ ahịa ọrụ nwere ike ijikwa ntụgharị asụsụ, ịkọwapụta mpaghara na ntụgharị asụsụ. Ọ nwere ike igosi transcript na ntụgharị asụsụ dị mfe maka ọdịnaya vidiyo ma nwee ike hụ na edere akwụkwọ niile kwekọrọ na atụmanya nke ndị na-ege ntị.
Nkọwa ndị a niile jikọtara iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ eCommerce ọkachamara. Ọ na-adịkarị ịchọta saịtị eCommerce nke atụgharịrị nke ọma ma ọ bụ ka nwere akara ego na usoro mba ọzọ. Obere ihe ndị ahụ na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ sie ike iji ma mee ka ị chee ma ọ bụrụ na ị sụrụ ngọngọ na saịtị ojoro. Gbaa mbọ hụ na eCommerce ahịa ahụmahụ bụ ihe dị mma maka ndị ahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ. Ọnọdụ bụ akụkụ dị mkpa nke kachasị mma azum ahia mba ofesi.
Otu esi acho ahia ahia ahia
Jide n'aka na ị ga-azụ ahịa n'etiti ụlọ ọrụ ntụgharị dị iche iche. Nwere ike ịchọta ha site na ịjụ gburugburu netwọkụ ọkachamara gị ma ọ bụ na-achọ ntanetị.
Nwere ike ịchọta ọrụ mpaghara site na iji usoro dịka ọrụ ntụgharị n'akụkụ m, ndị ọrụ ntụgharị ọrụ UK ma ọ bụ ndị ọrụ ntụgharị ntụgharị London. Nwekwara ike iji asụsụ ị chọrọ chọọ ọrụ ahụ, na-eji usoro dịka ntụgharị asụsụ ahịa na Spanish, ntụgharị asụsụ ahịa n'asụsụ Chinese, ma ọ bụ ntụgharị asụsụ ahịa n’asụsụ French.
Dị njikere ịkwadebe ndepụta nke ajụjụ maka ọrụ ọ bụla. Otú ịkpọtụrụ gị si zaa ajụjụ ndị ahụ ga-agwa gị otú ha ma ihe n’uru na otú ha ga-esi nwee nkwurịta okwu. Nwere ike ịjụ maka ịnye ọnụahịa, otu ha si ahazi ahazi ka ị nọrọ na njedebe, ihe nzere ntụgharị asụsụ ha, na ahụmịhe ha ntụgharị asụsụ ahịa bụ.
Tags: ecommerce ntụgharịazụmahịa mba ụwaahia mba ofesiimekọ ihe ụwantụgharị asụsụ ahịaỌtụtụ asụsụndoputatranscriptionntụgharị asụsụtranslationọrụ ntụgharị asụsụ